दाङमा महिलालाई सबै कपडा खोल्न लगाएर एक्सरे गरेपछि…. « Etajakhabar
दाङमा महिलालाई सबै कपडा खोल्न लगाएर एक्सरे गरेपछि….
प्रकाशित मिति : १५ असार २०७७, सोमबार १८:२५
दाङ । महिलालाई एक्सरे गर्ने वहानामा पुरै लुगा खोल्न लगाएर नाँ गै वनाउने एक स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेका छन् । छातीको एक्सरे गर्न गएकी महिलालाई श’रिरका सबै लुगा खो ल्न लगाउने स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेका हुन् । महिलाका पतिले दिएको उजुरीको आधारमा दाङको घोराहीमा रहेको नीजि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेका हुन् । घोराहीमा रहेको गोरखा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले एक्सरे गर्ने वहानामा महिलालाई नां गै ब’नाएका थिए ।
घोराहीको १५ मा रहेको गोरखा हस्पिटलमा छातीको एक्सरे गर्न पुगेकी घोराही १८ की एक महिलालाई ना ङ्‍गै बनाएको आरोपमा अस्पतालको रेडियो ग्राफिक्समा काम गर्ने बबई गाउँपालिका ५ का २२ वर्षीय नवराज डाँगीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
डाँगीले महिलालाई कम्मर तलको लुगा पनि फु’काल्न लगाएका थिए । महिलाका पतिले दिएको उजुरीका आधारमा डाँगीलाई पक्राउ गरेको दाङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी सुमित खड्काकाले बताएका छन् । छा’तीको एक्सरे गर्न गएकी महिलालाई डाँगीले छातीको भागका कपडाका साथै कम्मरमुनी समेत कपडा खोल्न लगाएको भन्दै महिलाका पतिले उजुरी दिएका थिए ।
यो पनि : काठमाण्डौंमा धीरज राईले पनि गरे देहत्याग
गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ नयाँपाटीमा एक युवक मृत फेला परेको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले जनाएको छ । मेलम्चीको सडकमुनि वाग्वीर स्याङ्तानको निर्माणाधीन घरमा सोलुखुम्बु महाथुलुङ गाउँपालिका स्थायी घर भएका अन्दाजी २४ वर्षीय युवक धीरज राई झु ण्डिएको अवस्थामा फेला परेको वृत्तका प्रहरी नायब निरीक्षक विकासबाबु न्यौपानेले राससलाई जानकारी दिनुभयो । घटनाका बारेमा थप अध्ययन भइरहेको छ ।